siteadmin, Author at khabarbox.com.np - Page3of 74khabarbox.com.np
Posted 6:15 am by siteadmin & filed under सामाजिक.
Posted 3:18 am by siteadmin & filed under राजनीति, राष्ट्रीय समाचार.
काठमाडौं, चैत १८ : कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चीनबाट अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्रीमा खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ। उक्त स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलर प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका छोराहरु संलग्न भएको आशंका गरिएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि अढाइ महिनाअघि नै बढेको प्रक्रिया रद्द गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले विवादास्पद… Read more »
चापागाउँ अपडेट : बालिकाको रिपोर्ट नेगेटिभ
Posted 4:57 am by siteadmin & filed under Uncategorized.
ललितपुर । ललितपुरको बज्रबाराही चापागाउँमा निकै शंका र हल्लाका एक बालिकाको परिवार तनावमा थियो । सबैतिरको दबाब आएपछि स्थानीय बज्रबाराही अस्पताल लगियो । उताबाट कोरोनाको लक्षणसँग ठ्याक्कै मिल्ने देखिएपछि टेकु हुँदै महाराजगंजस्थित कान्ति बाल अस्पतालमा रिफर गरिएको थियो । कोरोना सक्रमणको आशंकामा जाँच गर्न ल्याइएको बालिकामा कोरोनाको लक्षण देखिएको अस्पतालले स्विकार गरेको छ । Source… Read more »
Posted 5:15 am by siteadmin & filed under स्वास्थ्य.
Posted 2:38 pm by siteadmin & filed under स्वास्थ्य.
Posted 6:51 am by siteadmin & filed under स्वास्थ्य.
Posted 9:05 am by siteadmin & filed under स्वास्थ्य.
Posted 5:41 am by siteadmin & filed under स्वास्थ्य.